(၂၉)ကြိမ်မြောက် ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးများ ဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂညီလာခံ သဘောတူစာချုပ် အထိမ်းအမှတ်နေ? - Yangon Media Group
ညောင်ဦး၊ နိုဝင်ဘာ ၁၉
မန္တ လေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ညောင်ဦး မြို့နယ် ကလေးသူငယ်အခွင့်အ ရေးများဆိုင်ရာ ကော်မတီနှင့် Plan International Myanmar တို့ပူးပေါင်းကျင်းပသော (၂၉) ကြိမ်မြောက် ကလေးသူငယ်အ ခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ ညီလာခံသဘောတူစာချုပ် အ ထိမ်းအမှတ်နေ့ အခမ်းအနားကို နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက်၊ နံနက် ၁ဝ နာရီခွဲက ညောင်ဦးမြို့နယ် ငါ့သ ရောက်မြို့ ဆည်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တဲမကျေးရွာတွင် ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အခမ်းအနား ပထမပိုင်းအစီအစဉ်တွင် ညောင်ဦးမြို့နယ် ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးများ ဆိုင်ရာကော်မတီဝင် ဦးသိန်းဟန် က အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပြီး Plan International Myanmar မန္တလေးရုံးခွဲမှ စီမံကိန်း မန်နေဂျာဒေါ်နွယ်နီအေးက အ ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့ကလေးများနေ့ဖြစ်ပေါ်လာပုံအကြောင်း ကို ရှင်းလင်းပြောကြားကာ ကလေး သူငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂညီလာခံ သဘောတူ စာချုပ်အတည်ပြု ပြဋ္ဌာန်းသော နေ့သဝဏ်လွှာကို ဖတ်ကြားသည်။ ဆက်လက်၍ ငါ့သရောက်မြို့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦး ခင်မောင်ဝင်း က ကလေးသူငယ်များဘဝလုံခြုံမှု ရှိစေရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရန် လုပ်ငန်းများနှင့် ကလေးသူငယ် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဆိုင် ရာ လုပ်ငန်းများအကြောင်းကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေး ပြောကြားသည်။
ဒုတိယပိုင်း အစီအစဉ်အား ဆက်လက်ကျင်းပရာ ညောင်ဦး မြို့နယ် ကလေးသူငယ်အခွင့်အ ရေးများဆိုင်ရာ ကော်မတီမှအဖွဲ့ ဝင်များက မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဖော် ကျူးရေးဖွဲ့ထားသည့် တစ်ခန်းရပ် ပြဇာတ်ဖြင့် ကပြဖျော်ဖြေခဲ့ကြပြီး တက်ရောက်လာကြသည့် ဆည်၊ တဲမ၊ ဖြူထွား၊ ရွာပုလဲနှင့် ထီးပု ကျေးရွာတို့မှ ကျောင်းနေအရွယ် ကလေးငယ်များအား တာဝန်ရှိသူများက ကလေးသူငယ်အခွင့်အ ရေးနှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက် ရေးဆိုင်ရာများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းများကို မေးမြန်းရာ ကျောင်းသားကျောင်းသူကလေး ငယ်များကဖြေဆို၍ မှန်ကန်စွာ ဖြေဆိုနိုင်ခဲ့သော ကလေးငယ်များ ကို တာဝန်ရှိသူများက ဂုဏ်ပြုဆု များ ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ကြောင်း သိ ရသည်။
ပြင်သစ်ချေးငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီးဌာန စီမံကိန်းကို အရေးတကြီး ဖော်ဆေ?
ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် အောင်မြင်ရေးအတွက် အဖွဲ့အစည်းအားလုံး လူထုကို ကိုယ်စားပြုရန် လို
ဆီးရီးယား စစ်စခန်း ပစ်ခတ်ခံရ၊ ၂၆ ဦးသေဆုံးဟု ဆီးရီးယား စစ်တပ် ဆို
၂ဝ၁၉ ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အချိန်စာရင်းထုတ်ပြန်၊ မတ်လ ၆ ရက်နေ့ စတင်ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး သင်္ချ??
နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ခရီးကြမ်းကားမောင်းပြိုင်ပွဲဝင်များ မြဝတီနယ်စပ်ဂိတ်မှတစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်
စစ်ကိုင်းမြို့သို့ တိုင်းဒေသကြီးရုံးများ ပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့ပေးရန် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖ??
ငြိမ်းစုစီ ဥပဒေ မူကြမ်းကို ပယ်ဖျက်ပေးရန် အင်အား ၁ဝဝဝ ခန့်ဖြင့် လမ်းလျှောက် ဆန္ဒပြ